सिरी ‘ए’ च्याम्पियन युभेन्टस रोमासँग पराजित — Imandarmedia.com
३दुनियाँकै महंगो जेल, जहाँ एकजना कैदीका लागि करोडौँ खर्च ?
४आज थप ५७० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
५भारतीय सेनाप्रमुख काठमाडाैं आउने मिति तोकियो
६नेपालमा आज मात्रै यति धेरै कोरोना संक्रमितकाे मृत्यु, कहाँ कति ?
७नेपालमा लागू भयो यस्तो नयाँ नियम, भारतलाई ठुलो झट्का
८कोरोना संक्रमणबाट नेकपा नेता चौधरीको मृत्यु
९डब्ल्यूएचओको अर्को नयाँ डरलाग्दो चेतावनीले विश्वभर त्रास
१०विश्वभर काेराेना संक्रमितको संख्या १ करोड ४ लाख नाघ्यो
११मोटोपन घट्दै–घटेन् भने अपनाउनुहाेस् यस्ता कुरा
७राष्ट्रपतिलाई नै कोरोना संक्रमण भएको खुलासा, सचिवालयले दियो यस्तो जानकारी
सिरी ‘ए’ च्याम्पियन युभेन्टस रोमासँग पराजित
एजेन्सी । इटालियन सिरी ‘ए’ च्याम्पियन युभेन्टस अन्तिम खेलमा रोमासँग पराजित भएको छ । रोमाविरूद्धको खेलमा शुरुवाती अग्रता लिएर पनि जोगाउन नसक्दा घरेलु मैदानमै युभेन्टस ३–१ को नमिठो हार बेहोर्न बाध्य भयो । रोमाको जीतमा डिएगो पेरोट्टीले दुई तथा निकोला कालिनिकले एक गोल गरे । गोन्जाले हिगुआइनले गरेको गोल नै युभेन्टसका लागि सान्त्वना बन्यो ।
जीतसँगै पाँचौ स्थानमा रहेको रोमाले ७० अंक जोड्यो । उसले अर्को सिजनको युरोपा लिग खेल्ने पक्का भइसकेको छ । पराजित युभेन्टस ८३ अंकमा रोकियो । तीन खेल अगावै च्याम्पियन बनेको युनेन्टसले खेलपछि यो सिजनको ट्रफी उचालेको छ ।
उता आर्सनलले १४औँ पटक एफए कप फुटबलको उपाधि जीतेको छ । वेम्बलीमा शनिबार राति भएको फाइनल खेलमा पेरिक एम्रकी आबुमियाङको २ गोल मद्दतमा आर्सनलले चेल्सीलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै १४औँ पटक उपाधि जितेको हो ।
१० खेलाडीमा सीमित चेल्सीका लागि क्रिस्टियन पुलिसिचले एक गोल फर्काएका थिए । निकै रोमान्चक र तनावपूर्णसमेत बनेको फाइनल खेलमा एक गोलले पछि परेको अवस्था उल्टाउँदै आर्सनलले उपाधि चुमेको हो । खेलको पाँचौं मिनेटमा पुलिसिचले गोल गर्दै चेल्सीलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
तर, २८ औं मिनेटमा आबुमियाङले पेनाल्टीमा गोल गर्दै आर्सनललाई १-१ गोलको बराबरीमा फर्काए । त्यसपछि खेलको ६७ औं मिनेटमा आबुमियाङले गरेको व्यक्तिगत दोस्रो गोल नै आर्सनलका लागि निर्णायक सावित भयो । ७३ औं मिनेटमा माटियो कोभासिचले दोहोरो पहेलो कार्डसहित रातो कार्ड पाएपछि चेल्सी १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो
आईपीएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर र चेन्नई सुपर किङ्स भिड्दै
क्यारेबियन प्रिमियर लिग- ट्रिनबागो र जुक्सको लगातार तेस्रो जित
जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले छैटौं पटक उचाल्यो च्याम्पियन्स लिग उपाधि
बार्यनसँगकाे लज्जास्पद हारपछि बार्सिलोनाका प्रशिक्षक सेटिन बर्खास्त
आर्सनलले १४औँ पटक जित्यो एफए कपको उपाधि
कोरोना महामारीपछिको वेष्ट इण्डिजविरूद्धको टेस्ट सिरिजमाथि इङ्ल्याण्डको कब्जा